Ganacsiga suuqa weyn ee Bakaaraha oo maalintii labaad xiran iyo kullamo ka socda Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ganacsiga suuqa weyn ee Bakaaraha oo maalintii labaad xiran iyo kullamo ka socda Muqdisho
Waxaa maalintii labaad gebi ahaan xiran ganacsiga suuqa ugu weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, kadib markii uu khilaaf xoogan ka dhashay canshuur kordhin oo ay wasaarada maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya kusoo rogtay ganacsatada gobolka Banaadir.
Inta badan bakhaarada iyo goobaha kale ee ganacsi ee ku yaalla suuqa Bakaaraha ayaa xiran, waxayna ganacsatada goobahaasi weli ka biyo diidan yihiin inay furaan xarumahooda ganacsi.
Kullamo kala duwan oo dhex maray guddi ay ganacsatada gobolka Banaadir soo xusheen iyo wasaarada maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa markale fashil kusoo idlaaday, waxayna ganacsatada weli diidan yihiin bixinta canshuurta lagu kordhiyay.
Dhinaca kale, ganacsatada gobolka Banaadir ayaa maanta kullamo la-leh guddi uu guddoomiyaha gobolka Banaadir arintaan u xil saaray, waxaana la fillayaa in guddiga ganacsatada ay sidoo kale kullan kale la yeeshaan wasiirka maaliyada C/raxmaan Bayle iyo xubno sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, wasaarada maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kusoo rogtay ganacsatada wax kala soo degta dekadda magaalada Muqdisho inay bixiyaan canshuur dheeraad ah, waxaana arrinkaasi ka biyo diiday ganacsatada gobolka Banaadir.